मे ०,, ० 26::05
त्यहाँ स्वस्थ आहारको अधिक र अधिक अनुयायीहरू छन्, तर के उनीहरू सुरक्षित खाना खान्छन्? बायोप्रोडक्ट, १०० प्रतिशत प्राकृतिक, वातावरण मैत्री - यी शब्दहरू अधिक लोकप्रिय हुँदैछन्।
विश्वभरका खाद्यान्न उत्पादकहरूले सक्रिय रूपमा उनीहरूलाई नाराको रूपमा प्रयोग गर्दै छन् जुन प्याकेजि of्गले भरिएका छन्, ग्राहकहरूलाई लोभ्याउने। विज्ञहरूका अनुसार कजाखस्तानमा यी सर्तहरूको प्रयोग प्रायः सार्वजनिक सम्बन्ध उत्पादनको विधि नै हुन्छ। यस जैविक उत्पादनको एक विशेष प्रमाणपत्र हुनुपर्दछ। आज देशमा 61१ उत्पादकहरू छन् जसले केवल २280० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा जैविक उत्पादनहरू उत्पादन गर्छन्। यी Akmola, Karaganda, Kostanay र उत्तरी काजाकिस्तान क्षेत्रहरुका फार्महरू हुन् जुन निर्यातमुखी छन्। तिनीहरूले विदेशमा गहुँ, फ्याक्स, मसूर, मटर, जौ, कनोला, पीठो, वनस्पति तेल सहित २० भन्दा बढी प्रकारका उत्पादनहरू पठाउँछन्।
उदाहरण को लागी, Kostanay क्षेत्र मा त्यहाँ त्यस्ता २० उद्यमहरु छन्, जस मध्ये दुई - creameries।
तिनीहरूले तैयार उत्पादनहरूको लागि यूरोपीयन प्रमाणपत्रहरू प्राप्त गरे र विषादी नाशको प्रयोग बिना नै उनीहरूको खेतमा उत्पादन गरिएको कच्चा मालबाट उत्पादन गर्दछन्।
कृषिदेखि टाढाका मानिसहरू विश्वास गर्छन् कि हाम्रो देशले वातावरण मैत्री उत्पादनहरू उत्पादन गर्दछ। तर यो आंशिक रूपमा सत्य छ: कसैले पनि विश्लेषण गरेन, उदाहरणका लागि, खेतहरूमा उपचार गर्न प्रयोग गरिएको कीटनाशक र हर्बिसाइड अवशेषहरूको उपस्थितिको लागि रोटी रोटी। धेरै किसानहरू उच्च-स्तरको ब्रान्डेड रासायनिक उत्पादनहरू प्रयोग गर्छन्, तर त्यहाँ कोहीहरू छन् जसले कटनी गर्ने बेलामा लागत कम गर्न चाहने भारी चिनियाँ मिश्रण प्रयोग गर्दछन्। यो पहिले नै प्रमाणित भइसकेको छ कि तिनीहरू एकै गहुँ वा अन्य बालीमा माटोमा जम्मा गर्न सक्छन्। र यसको मतलब यो हो कि, यो शंका बिना, हामी अन्जानमै आफूलाई विष दिन्छौं।
आन्कोलॉजिस्टहरूका अनुसार काजाकिस्तानमा बिरामीहरूको स grows्ख्या हरेक वर्ष बढ्छ, उनीहरू खानाको माध्यमबाट शरीरमा प्रवेश गर्ने अवशिष्ट रसायनको प्रभावलाई हटाउँदैनन्।
विकसित देशहरूमा यो सम्बन्ध लामो समयदेखि नै पत्ता लगाइएको छ र सक्रियताका साथ खेतहरूमा रसायनलाई छोड्न र जैविक उत्पादनहरू उत्पादन गर्न थाल्छ। काजाकिस्तानमा प्रगति भइरहेको छ, तर यो सानो हिस्सा मात्र हो। जैविक उत्पादनहरू उत्पादन गर्ने धेरै फार्महरू निर्यातमुखी हुन्। कुन कुराले तिनीहरूलाई कजाकिस्तानलाई खुवाउन रोक्छ? जतिसुकै बदलिए पनि यसका थुप्रै कारणहरू छन्।
विदेशमा प्रमाणपत्रको लागि
२०१ Kazakh-२०१ Kazakh मा कजाखस्तानमा जैविक उत्पादनहरू बढाउने आवश्यकताको बारेमा कुरा गर्यो। उनीहरूले लामो समयसम्म तर्क गरे, प्रस्ताव गरे, जैविक खेती सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तयार गरे, र २०१ 2013 मा यसले काम गर्न थाल्यो। तर घरेलू बजारको सट्टा उत्पादनहरू मात्र निर्यात गरियो। एउटा कारण यो हो कि त्यस देशसँग प्रयोगशाला छैन जुन सबै आवश्यक अनुसन्धानहरू गर्न सक्थ्यो र प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्थ्यो, र विदेशी कम्पनीहरू देशभित्र छिर्न हतारमा थिएनन्। त्यसकारण जैविक खेतीमा स्विच गर्ने निर्णय गर्ने फार्महरूले विदेशी प्रयोगशालाहरूमा सम्पर्क गर्नुपर्‍यो। त्यस्तै एक फार्म Uspenovka LLP हो।
"२०१ 2015 मा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छौं र जैविक उत्पादनको उत्पादनमा संलग्न छौं," निर्देशकले भने फार्म "Uspenovka" अनातोली SERGEEV। - उत्पाद नमूनाहरु को सबै अध्ययन जर्मनी मा आयोजित गरीन्छ। र मात्र परीक्षण नतीजा प्राप्त भएपछि, हाम्रो उत्पादनहरू जैविक रूपमा मान्यता प्राप्त। यो केवल पहिलो चरण हो। जब हामी युरोपमा उत्पादनहरू पठाउँछौं, यो फेरि जाँच गरिन्छ, र यदि गुणस्तरको नतिजा निश्चय गरिएको छैन भने हामीले त्यसलाई फिर्ता फिर्ता गर्नुपर्नेछ वा सामान्य मूल्यमा बेच्नु पर्छ। यो एक धेरै जटिल र लामो प्रक्रिया हो। प्रमाणीकरणको लागत २० हजार यूरो हुन्छ, एउटा विश्लेषणको लागत e०० युरो हुन्छ र जर्मनीमा नमूना वितरण पनि हुन्छ। ठूलो यातायात लागत। र, त्यसकारण, जैविक उत्पादनहरूको मूल्य धेरै बढी हुनेछ।
युरोपियनहरूले किन हाम्रा उत्पादनहरू किन्छन्? यो किनभने मानिसहरूले स्वास्थ्यको ख्याल गर्न शुरू गरे। तिनीहरू अब आफूलाई विष दिन खोज्दैनन्, किनकि सबै विष जुन विष गर्न सकिन्छ, तिनीहरूले आफैंमा विष दिए। अब तिनीहरूले हामीलाई सबै विषहरू पठाउँछन्, र हामी खुसी छौं कि हाम्रो उत्पादकत्व बढ्दैछ, झारको संख्या घट्दैछ। तर कम स्वास्थ्य प्राप्त गर्दै। हामी सफा खानाको साथ स्वस्थ रहन आवश्यक छ। यो व्यवसाय यहाँ तपाइँको जन्मभूमि मा व्यवहार गर्न आवश्यक छ।
कुन प्रक्रिया सुस्त हुन्छ?
एनाटोली सर्जेयभका अनुसार उनी घरेलु बजारमा आफ्ना उत्पादनहरू बेच्न खुशी हुनेछन्। तर त्यहाँ केहि बट्स छन् ...
"हामी साँघुरो सर्कलमा जैविक उत्पादनहरूको बारेमा धेरै कुरा गर्छौं, तर हामीले जनसंख्यालाई सूचित गरेर सुरु गर्नु पर्छ," कृषिले विश्वास गर्दछ। - मानिसहरूलाई थाहा छैन शुद्ध उत्पादनहरू के हुन्। तिनीहरूलाई जैविक भन्न सकिन्छ, बायोप्रोडक्ट्स हुन सक्छ। नागरिकहरूसँग स्टिरियोटाइप छ: यदि उत्पादन जैविक हो भने, तिनीहरू विश्वास गर्छन् कि यो जैविक अवशेषहरू, खाद सहितको प्रयोग गरेर बढेको हो। तर यो सत्य होइन। जैविक खेती केवल खेतहरूमा रसायन प्रयोग गर्न अस्वीकार मात्र होइन, प्रमाण पत्र पनि प्राप्त भयो, साथ साथै कम्पनीले निरन्तर अनुगमन पनि गरेको हो।
- काजाकिस्तानमा एउटा कानून लागू गरिएको छ, त्यहाँ इको-उत्पादका मापदण्डहरू छन्, २०१ in मा, "जैविक कृषिको सडक नक्शा" मा हस्ताक्षर गरियो। यो लाग्छ कि त्यहाँ सबै छ, तर केहि काम गर्दैन, - भने "अर्गानिक फार्मिंग एसोसिएशन" को अध्यक्ष वाडिम लोपुकिन। - देशमा त्यस्ता उद्यमहरू छन् जुन जैविक उत्पादनहरू बढाउँछन्, तर मुख्यतया उनीहरू निर्यात हुन्छन्। वातावरणीय कच्चा मालको प्रशोधन र तयार उत्पादनहरूको उत्पादनमा संलग्न थुप्रै उद्यमहरू छन्। त्यस्ता उद्योगको संख्या बढ्नु र राज्यले सहयोग पुर्‍याउनु पर्छ। केही वर्ष पहिले, जैविक खाद्य को राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकृत गरिएको थियो, तर आज यो लेबल हाम्रो उत्पादनहरु मा छैन। यो कानून years बर्ष पहिले अपनाइएको थियो, तर यसले काम गर्नु सुरु गर्दैन।
लोपुखिनका अनुसार घरेलु जैविक खेतीको विकासमा २ कारकले बाधा पुर्‍याएको छ - किसान र उपभोक्ताको ज्ञानको अभाव र मुलुकमा जैविक उत्पादनको व्यावहारिक अनुपस्थित बजार। यी दुई कार्यहरूलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ।
जैविक उत्पादनहरुका साथ घरेलु बजार भर्न किसानहरुलाई आकर्षित गर्ने प्रक्रिया २ बर्ष भन्दा बढि अघि जमिनबाट हट्नु पर्ने थियो। जब JSC "विशेषज्ञता को राष्ट्रीय केन्द्र" अनुसन्धान को लागी मान्यता प्राप्त र जैविक उत्पादनहरु को लागी प्रमाणपत्र जारी। तर चीजहरू अझै छन्: यस समयमा उनीहरूले एकल राष्ट्रिय प्रमाणपत्र भने जारी गरेनन्।
"हाम्रो केन्द्रले जैविक उत्पादनहरूका लागि प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्छ, तर किसानहरू कजाखस्तानको प्रमाणपत्र लिनमा चासो राख्दैनन्, किनभने उनीहरू निर्यातमा बढी रुचि राख्छन्," उनले भने। दिनारा उराज्बेकोवा, कोशन्या शाखा को विशेषज्ञ राष्ट्रिय केन्द्रको विशेषज्ञ, जैविक उत्पादनहरुको प्रमाणीकरणका लागि रिपब्लिकन आयोगका सदस्य। - दक्षिणी क्षेत्रका किसानहरू हामीसँग सम्पर्क गरे, तर उनीहरूले उत्पादनहरूको थोरै मात्रा उत्पादन गर्दछन्, र उनीहरूको लागि प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न लायक छ।
तर अझै पनि, किसानहरूको एक विशाल सर्कललाई थाहा छैन कि यस्तो केन्द्रले लामो समयदेखि यस देशमा काम गरिरहेको छ।
एनाटोली सर्जेइभले भने, “मैले पनि, बर्षदेखि जैविक काम गरिरहेको व्यक्तिले प्रयोगशालाको बारेमा केही सुनेका छैनन्। - जे होस् म एक राष्ट्रिय प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न खुसी हुनेछु। किनभने क्षेत्रहरू बाहेक मसँग मिल छ र म जैविक पिठो आपूर्ति गर्न सक्दछु। त्यहाँ बेकरी छ जहाँ हामी जैविक रोटी र अन्य बेक्ड सामानहरू बनाउन सक्दछौं। यसको लागत सामान्य भन्दा -०-5० प्रतिशत बढी महँगो हुनेछ।
कोस्तानाई किसानहरूले कृषि मन्त्रालय र संसदमा कृषि समूहलाई कसरी घरेलु जैविक उत्पादनहरू कजाखस्तानी पसलहरूको आश्रयमा पुग्न मद्दत गर्न प्रस्ताव पठाए। प्रस्ताव मध्ये - जैविक खेती को विकास को लागी एक स्पष्ट संयन्त्र बनाउन को आवश्यकता छ। किन अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणपत्रको साथ खेतहरूलाई घरेलु प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने थाहा छैन? जैविक उत्पादनहरूको विकासको लागि एक उपमन्त्रीको व्यक्तिगत जिम्मेवारी सुदृढीकरण गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको थियो।
यो स्पष्ट छ कि भविष्य वातावरण मैत्री उत्पादनहरूको हो, तर जब यो कजाकिस्तानका लागि आउँछ, त्यहाँ अझै एक ठूलो प्रश्न छ।
द्वारा पोस्ट गरिएको: Tatyana Derevyanko
टैग: काजाकिस्तानपारिस्थितिक उत्पादनहरूэкспорт